Topnews:- Sabahaha Dowladda UK uga jeesatay Somaliland?
28 Janaury 2013 Waagacusub.com- Waa markii ugu horeeysay ee Website-ka Wasaarada Arrimaha dibadda Ingiriiska lagu faafiyo Warsaxaafadeed lagu tilmaami karo mid Shacabka reer Somaliland loogu muujiyay sida Dowladaha ugu tunka weyn beesha Caalamka uga jeesteen xiriirkii wada shaqeyn ee kala dhaxeeyay Maamulka Ahmed Siilaanyo madaxda u yahay.
War Murtiyeedka Dowladda Ingiriiska oo la rumeeysan yahay inuu ka dhashay Caro diblomaasiyiinta reer Galbeedka ay ka qaadeen dhaqanada guracan ee Maamulka Siilaanyo ,sida xasuuqa rayidka,Musuqmaasuqa iyo Caburinta Saxaafadda waxaa si weyn u baahiyay dhamaan Warbaahinta Caalamka.
Telefishinada Ingiriiska iyo Mareykanka sida BBC World ,Skynews,CNN iyo ABC ayaa si weyn u tebiyay digniinta Dowladaha Britian uga digtay Muwaadiniinta inay u socdaalaan Somaliland,iyadoo kula talisay kuwa jooga hada inay si deg dega uga baxaan.
Barta Internet-ka ee Google news hadii aad booqato waxaa daqiiqad walba soo gelaya Warbixino Wargeysyada ugu caansan dunida ka qoreen qadiyadii Ingiriiska ee Somaliland iyo sida ay isu bedeshay.
Telegraph,the Mail,the Gaurdian,New york times,Washington Post iyo The Mirror ayaa si weyn uga hadlay Warsaxaafadeedka Dowladda Ingiriiska oo ay ku sifeeyeen mid lagu godoomiyay Somaliland.
isbedelka Warbixinada Warbaahinta reer Galbeedka waxaa ka mida halkii ay Somaliland ugu yeeri jireen hada waxay isticmaaleen Waqooyiga Somalia.
Hadaba Isweydiintu waxay tahay maxaa sababay in Dowladda Ingiriiska ka soo jeesato Somaliland?
1- Wada shaqeynta Sirdoonka UK iyo Somaliland oo niyad xumo laba sano jirtay kadib ku dhamaaday inay kala tagaan kadib markii Warbixinada Nabadsugida Hargeysa noqdeen kuwa intooda badan xaqiiqada ka fog.
2- Dowladda Ingiriiska oo aaminsan in Wasiiro ka tirsan Maamulka Siilaanyo la shaqeeyaan Al-Shabaab sida Wasiirka Madaxtooyadda Xersi Xaaji Cali.
3- Dowladda Ingiriiska oo tixgelisay Warbixin lagu lifaaqay Dukumiintiyo cadeeymo buuxa leh taas oo Wasiiradda Khaarijiga Somalia Fawzia Yusuf Haji Adam u gudbisay dhigeeda Dalkaas Mr Hague.iyadoo Warbixinta looga hadlay Musuqmaasuqa iyo Cadaalada darada uu bulshada Somaliland ku hayo maamulka Siilaanyo.
4- Mareykanka oo Ingiriiska Cadaadis ku saaray inuu joojiyo maalgelinta uu siiyo Maamulka Siilaanyo marka laga reebo kuwa Samafalka bulshada.
5- Hay''adaha Xaquuqul Insaanka oo Dowladda Ingiriiska ku oogay dacwad la xiriirta in Ciidamo ay Somaliland u tababareen oo lagu magacaabo RRU xasuuqeen dad rayida gudaha Magaalada Hargeysa.
6- Jaaliyadda Somaliland ee dalka Europe oo dacwad ka dhana Madaxweyne Siilaanyo iyo xulufadiisa ka furay dalka Ingiriiska si loo Maxkamadeeyo maadama uu amray xasuuqii lagula kacay banaanbaxayaal ka dhiidhiyay ku shubashadii doorashooyinkii Dowladaha hoose .
7- Madaxweynaha Jibouti oo Dowladda Ingiriiska u gudbiyay dacwad la xiriirta dad u dhashay beesha Ciisaha oo lagu laayay degaanka Saylac,iyadoo dacwadaas lagu xusay suurtagalnimada in dagaal Sokeeye ka dhaco Somaliland.
8- Sirdoonka Ingiriiska oo ogaaday in Saraakiil ka tirsan Al-Shabaab si xora ugu nool yihiin Burco iyo Hargeysa kadib markii Madaxda Somaliland siisay gabaad.
9- Aqoonyahano u dhashay Khaatuma State iyo Awdal State oo Waaxda dabagalka dimbiyada ee Golaha amaanka u gudbiyay dacwad la xiriirta in Dowladda Ingiriiska taageero siiso Maamulka Siilaanyo oo xasuuq kula kacay dadkooda.
10- Mareykanka iyo Ingiriiska oo isla gartay in filim cabsi gelina loo shido Maamulka Siilaanyo si ay sharuuda adag ugu xirin qadiyada ka mid ahaanshaha Jamhuuriyadda Somalia.
Warsaxaafadeedka looga digay Amaanka Somaliland muxuu horseedi karaa?
Warbixinta Dowladda Ingiriiska waxay Somaliland ku shaabadeysay amaan xumo taas oo horseedi karta in Hay''adaha samafalka iskaga baxaan si deg dega.
Go''aanka Ingiriiska wuxuu horseedi karaa in Dowladaha la deriskaa sida Ethiopia iyo Jibouti ka xirtaan albaabada Somaliland maadama lala xiriirshay halis.
Somaliland waxay u baahan yahay badbaadin maxaa yeelay labadii sano ee Siilaanyo Madaxtooyada joogay waxaa burburay hanaankii dimoqoraadiyada iyo sinaanta taas oo ka bilaabatay weerarkii Taangiyada loo adeegsaday ee Kalshaale lagu xasuusaqay dad rayid ah.